उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघमा सेरेङ र भण्डारीको भिडन्त, को बन्ला अध्यक्ष ? — Purbicommand
उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघमा सेरेङ र भण्डारीको भिडन्त, को बन्ला अध्यक्ष ?
२०७८ भाद्र ११, शुक्रबार ०४:२६ गते
उर्लाबारी । भदौं ३० र ३१ गते हुने उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघको चुनाबी साधारणसभाको सरगर्मी बढ्न थालेको छ । नेपाली काग्रेस समर्थक ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै संघका पूर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष तारामान सेरेङलाई अध्यक्ष पदको उम्मेद्वार बनाएको छ । कांग्रेस समर्थक ब्यवसायीहरुको प्यानलमा जनता समाजवादी पार्टी, लिम्बूवानलगायत रहेका छन् । कांग्रेस समर्थक ब्यवसायीहरुको पकड रहेको संघमा युवा ब्यवसायी सेरेङले लामो समय विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका कारण पनि यस पटक उहाँकै पल्लाभारी हुने देखिएको छ । कांग्रेस गठबन्धन प्यालनबाट अधिकांश युवा ब्यवसायीहरुलाई अघि सारिएको छ । गत निर्वाचनमा महासचिबमा पराजित बन्नु भएका हेमराज गुरुङलाई सोही पदमा उठाइएको छ । दिलकुमार श्रेष्ठ, निरु चौहान, पूर्ण सिंगक लिम्बू, भीम घिमिरेलगायतको नाम चर्चामा छ । तर, औपचारिक रुपमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा को उम्मेद्वार बन्ने भन्ने कुरा फाइनल भएको छैन । यता बामपन्थी गठबन्धन, राप्रपासहितको प्यानलबाट अध्यक्ष पदमा वर्तमान बाणिज्य उपाध्यक्ष शेरबहादुर भण्डारीलाई उठाएको छ । भण्डारी नेकपा एमाले समर्थक ब्यवसायी हुनुहुन्छ । यो प्यालनबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा यामलाल रसाईली, उपाध्यक्षमा जंगबहादुर कार्की, पवन चौधरी, महासचिबमा सम्झना खतिवडालगायत उम्मेद्वार अघि सारिएको छ । तर, औपचारिक रुपमा अध्यक्ष बाहेक अन्य पदको उम्मेद्वारी घोषणा भएको छैन । यता, स्वतन्त्रबाट केदार रिजालले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने बताएपनि पद बार्गेनिङका लागि मात्रै भएको बुझिएको छ । तर, रिजालले भने बार्गेनिङका लागि नभई ब्यवसायीको हकहितका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिन लागेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
किन ढिलाई भयो त उम्मेद्वारी घोषणा ?
नेपाली कांग्रेसनिकट ब्यवसायीहरुको उम्मेद्वार लगभग टुंगो लागिसकेको छ भने एमालेसहितको गठबन्धनको पनि उम्मेद्वारी छिनोफानो भइसकेको छ । तर, दुबै समूहले अर्को समूहले उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि मात्रै आफ्ना उम्मेद्वार घोषणा गर्न खोजेका कारण हालसम्म दुबै पक्षले उम्मेद्वार घोषणा गर्न नसकेका हुन् ।
कुन समूहको पल्लाभारी होला ?
कांग्रेस र एमाले दुबै प्यानल आफ्नो जित हुने दाबी गर्छन् । कांग्रेसले अधिकांश युवाहरुलाई उम्मेद्वार बनाएका कारण पनि यस पटकको चुनाबी सरगर्मी निकै बढ्ने देखिन्छ । सदस्य, महासचिब र बरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नु भएका अनुभबी तथा लामो समय संघको हितमा काम गर्नुभएका तारामान सेरेङको अध्यक्षमा उम्मेद्वारीले ब्यवसायी तथा उद्योगीहरुमा उत्साह बढाएको छ । निकै जोसिला र काममा कटिबद्ध भएर लाग्ने युवा सेरेङ भएको धेरै ब्यवसायीहरुको विश्लेषण छ । कांग्रेस एकढिक्का भएर सेरेङलाई जिताउन लागेको खण्डमा उहाँकै पल्लाभारी हुने निश्चित ।
यता एमाले गठबन्धनका वर्तमान बाणिज्य उपाध्यक्ष शेरबहादुर भण्डारी पनि लामो ब्यवसाय अनुभव भएका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ । कांग्रेसमा देखिएको गुटगत राजनीति प्रभाव देखिए र एमाले, राप्रपा तथा माओवादीले इमान्दारीका साथ भण्डारीलाई दिएको खण्डमा विजयी हुने सम्भावना पनि छ ।